Nambaran’i Claude Rasata mpilalao fahiny tao sady mpanazatra no mpitantana an’ity klioba ity ihany koa fa hisy ny lanonam-pifaliana in-3 miantoana hotantaerahina amin’io andro io dia ny “1er mi-temps” sy “2 mi-temps” eo amin’ny kianjan’Anosy Avaratra. Ny “3è mi-temps” kosa dia hotanterahina ao amin’ny Espace Bouba eny Ambohitrinimanga Anosy Avaratra ihany. Marihana fa tamin’ny taona 1953 no nitsangana ny FSN ka Club Firaisan’i Sabotsy Namehana no anarany tamin’izany fa taty aoriana (1971) kosa namerenan’i Claude Rasata azy dia novana ho Club Firaisana Sab-Nam ny anarany mandraka ankehitriny. Efa nandalo tao amin’ity ekipa ity ry Herisetra sy Hery kely ekipam-pirenena Malagasy, ny mpanazatra Rasoanaivo Etienne sy Louis Robson. Efa nilalao tao koa tamin’ny taona 1980 ny filoha Hery Rajaonarimampianina.